Articles | ALARM Myanmar
ALARM’s “Sustainable Natural Rubber Initiative: ExploringaGateway to Revitalizing Myanmar’s Natural Rubber Industry” Online Workshop
ALARM’s “Sustainable Natural Rubber Initiative: ExploringaGateway to Revitalizing Myanmar’s Natural Rubber Industry” Online Workshop The global rubber industry is being increasingly threatened by many challenges including price fluctuation in the last decade, its...
Non-performance loan NPL
Non-performance loan NPL (သို့) ပြန်မဆပ်တဲ့ ဘဏ်ချေးငွေ ပြန်မဆပ်တော့တဲ့ ဘဏ်ချေးငွေတွေ ဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတာလည်း? ဘဏ်ကငွေချေးပြီးပြန်မဆပ်တာ ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်ပါပဲ။ အနည်းအကျဉ်းတော့ဖြစ်တတ်တာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ NPL တွေများလာရင်တော့ တိုင်းပြည်ပဲ စီးပွားရေးကမောက်ကမဖြစ်နေလို့လား...
Can Riverbanks and Canals be maintained with Vetiver grass?
မြစ်နဲ့တူးမြောင်း ကမ်းပါးတွေကို ဗက်တီဗာမြက်နဲ့ ထိန်းသိမ်းလို့ ရမလား ••••••••••••••••••••••••••• ဒစ်ခ် (ရစ်ချတ်) ဂရင်မ်ရှော (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဗက်တီဗာအကြီးအကဲ) ထိုင်းနိုင်ငံကလို့ ယုံကြည်ရတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေက၊ မြစ်နဲ့တူးမြောင်း ကမ်းပါးတွေကို ထိန်းသိမ်းရာမှာ ဗက်တီဗာမြက်တွေကို...